I-7 Eyona Ndlela yokufuna ukuFunda kwelinye ilizwe kwiScholarship yasimahla ye-2021/2022 Portal: Iindaba zeSikolo sangoku
Ndifuna ukufunda kwelinye ilizwe ngokuSholarship yasimahla: Ukufunda phesheya kuyiphupha labafundi abaninzi. Nangona kunjalo, iindleko eziphezulu zokufunda zihlala zilibona eli phupha. Kodwa uza kuthini xa ukuxelela ukuba ikhona indlela?
Kananjalo, kuthekani ukuba ukuxelela ukuba kusekho ithemba lokufunda phesheya simahla, ungakholelwa? Ndivumele ndiyophulele kuwe. Usenokufunda phesheya phakathi kwexesha elinzima. Kwaye oku kunokwenzeka ngenxa wokuya.
In eli nqaku, malunga nezinye zezifundo ezinokukunceda ufunde kwelinye ilizwe. Nangona kunjalo, konke okufuneka ukwenze kukuhlangabezana nefayile ye- ukufaneleka. Oku kulandelayo zezona ziphakamileyo ndifuna ukufundisisa phesheya simahla wokuya:
1. IHubert Humphrey Yobambiswano eMelika yaBafundi beZizwe ngeZizwe
Le nkxaso-mali yeyabaqeqeshi abanamava. Kwakhona, yeyabo banomdla wokomeleza izakhono zabo zobunkokeli ngotshintshiselwano lolwazi kunye nokuqonda malunga nemicimbi yenkxalabo efanayo e-US nakwamanye amazwe abantu.
Nangona kunjalo, amaFellows abekwe kwenye yeeyunivesithi zaseMelika ezithatha inxaxheba. Kwakhona, Bahlobo abakwazi ukukhetha eyunivesithi abaya kuya kuyo. Endaweni yokuba babelwe kumaqela ahlukeneyo ayi-7-15 kwezona ndawo zibalulekileyo zokubamba iindwendwe. Kodwa oku kusekwe kwindawo abanomdla kuyo nakwintsimi yobungcali.
Ukongeza, nceda uqaphele. Iqela ekujoliswe kulo ngabemi bamazwe afanelekileyo kwi-Sub-Saharan Africa. Kwakhona, ezo zeYurophu kunye ne-Eurasia. Kwaye ezo zoMbindi Mpuma kunye noMntla Afrika. Kanye neMpuma Asia kunye nePacific. Ukongeza, uMazantsi kunye noMbindi weAsia, kunye neNtshona yeNtshona.
Imali Award: Ndwendwela ikhonkco lesicelo solu lwazi.
mfuneko: Umfaki-sicelo kufuneka abe nayo igraduate (eyunivesithi yokuqala) isidanga. Kwakhona, kufuneka ubuncinci kwiminyaka emihlanu yexesha elizeleyo, namava obuchule. Kwaye kufuneka ube namava ancitshisiweyo okanye angabinalo ngaphambili e-US Ngapha koko, kufuneka ubonakalise ubunkokeli, kwaye kufuneka ubenerekhodi lenkonzo yoluntu eluntwini. Kwakhona, kufuneka ube nakho ulwimi lwesiNgesi.
Umhla wokugqibela: Phambi ko-1 Okthobha rhoqo ngonyaka.
Amanqaku afumanekayo: Amakhulu amabini (200).
isicelo: COFA APHA
2. I-International Ambassador Scholarships kwiYunivesithi yaseWest London
Le ngenye ye Eyona nto ndiyifunayo ukuba ndifunde kwamanye amazwe ngeengxowa-mali zamahhala. Kwaye iyaqonda kwaye ibonelela ngenkxaso yemali kubafundi ababalaseleyo. Kwakhona, yenzelwe abo banqwenela ukuba ngoonozakuzaku beYunivesithi yaseNtshona London.
Ngapha koko, kubalulekile ukuba uyazi ukuba ibonelelwa yiYunivesithi yaseNtshona London, UK. Kwaye igubungela nasiphi na isidanga esigcweleyo okanye isidanga sokuqala kwiDyunivesithi yase West London. Kwakhona, iqela ekujoliswe kulo kwesi sifundo ayiyo-EU AbaFundi beZizwe.
Imali Award: £ 5,000.
mfuneko: Abafakizicelo kufuneka babe sele befakile isicelo sokufunda kule yunivesithi. Kwaye kufuneka ukuba sele ufumene isibonelelo esisemthethweni kwelinye lamagosa ethu okwamkelwa. Kwakhona, kufuneka ubonise umdla kunye nokukwazi ukuba ngummeli ophumeleleyo wamazwe aphesheya.
Umhla wokugqibela: 30 Matshi / 1 Julayi rhoqo ngonyaka.
Amanqaku afumanekayo: Amakhulu (100).
3. Wamkelekile kuQeqesho lwaMazwe ngaMazwe
Olu manyano lubonelela abantu bamazwe anengeniso ephantsi kunye naphakathi ithuba lokufumana uqeqesho lwasemva kwesidanga okanye uphando lwasemva kwezempilo kwimpilo yoluntu kumazwe anengeniso ephantsi kunye naphakathi (ngaphandle kwe-India ne China). Kwakhona, yenye yezona zinto zilungileyo ndifuna ukufundisisa phesheya ukuze ndifundele simahla.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka usekwe kumbutho wokubamba ofanelekileyo kwilizwe eliphantsi okanye elinengeniso ephakathi kwiprojekthi yophando. Inokuba ngumbutho wakho wangoku okanye owahlukileyo.
Umbutho wakho wokubamba kufuneka uvume ukubonelela ngendawo kunye nezixhobo ozifunayo. Kwaye oku kususela kumhla wokuqala ukuya kumhla wokugqibela webhaso lakho. Nangona kunjalo, unokwenza uqeqesho lwakho kumaziko okubalasela kwingingqi okanye kumazwe aphesheya. Nangona kunjalo, ufumana iinkcukacha ngakumbi kwikhonkco lesicelo elingezantsi.
Imali Award: I- £ 150,000 ukuya kwi- £ 300,000.
mfuneko: Abafakizicelo kuqeqesho lokuthweswa isidanga kufuneka, okanye sele beza kugqiba, isidanga sokuqala kwaye bafuna ukuqhubeka nokwenza iMasters okanye i-PhD. Kwakhona, abafaki-zicelo bophando lwasemva kwexesha kufuneka babe ngabaphandi abane-PhD okanye efanayo. Kananjalo, uphando olucetywayo kufuneka lujolise kokuphambili kwezempilo kwilizwe elinengeniso ephantsi okanye ephakathi.
Umhla wokugqibela: Umhla wokugqibela kumjikelo we-2 ngowama-30 ku-Epreli 2021 (isicelo sokuqala). Ngelixa umhla wokugqibela wezicelo ezipheleleyo ngu-9 Julayi 2021.
Amanqaku afumanekayo: Ayichazwanga ngqo.
4. Ubungcali bezeMpilo kwiYunivesithi yaseJohn Hopkins
Izifundo ezibini zezeMpilo yoLuntu ziyafumaneka kubafundi abavela kumazwe anengeniso ephantsi kunye naphakathi. Kwaye ezi nkxaso-mali zezabo banqwenela ukufaka isicelo kwi-Intanethi ye-Applied Science (MAS) kwi-Intanethi yezeMpilo kwiYunivesithi yaseJohn Hopkins.
Nceda uqaphele. Bonke abafundi ababhalisileyo be-MAS baya kufumana i-OPAL (iiNkqubo ezikwi-Intanethi kwi-Applied Learning) Scholarship. Kwaye le mfundo sisixa semali-mboleko nganye. Iya kusetyenziswa kuzo zonke iikhosi ezifunekayo kuyo yonke inkqubo yokufunda.
Imali Award: I-US $ 10,000.
mfuneko: Abafakizicelo kufuneka babe ngabemi kunye nabahlali bamazwe anengeniso ephantsi okanye ephakathi. Kwakhona, kufuneka uhlale okwethutyana kumazwe anengeniso ephezulu. Ngapha koko, kuphela ngabo banokuthetha ngokutyibilikayo, bafunde kwaye baqonde isiNgesi abafanelekileyo. Kwakhona, umenzi-sicelo kufuneka abe ubuncinci isidanga seBachelor, enerekhodi eqinileyo yokusebenza ngempumelelo kwezemfundo.
Umhla wokugqibela: 15 Meyi wonyaka ngamnye.
Amanqaku afumanekayo: Isibini (2).
5. I-MSc yoShishino loShishino kunye neNzululwazi yeZifundo kwiYunivesithi yase-Exeter
Kwakhona, le yeyona nto intle endifuna ukuyifunda phesheya ngezifundo zasimahla. Kwaye yenzelwe abo banikwe indawo kwinkqubo ye-MSc yoShishino kunye neNkqubo yoLawulo loTshintsho. Le kwiYunivesithi yase-Exeter ngoSeptemba 2020 yokungena.
Kwakhona, kukho iifizi ezimbini zokufunda ezifumanekayo kubafundi. Oku kuya kunikwa umfundi we-1 wamanye amazwe. Kwaye umfundi we-1 ovela e-UK okanye kwi-European Union.
Ngaphaya koko, izifundiswa zenzelwe oosomashishini abasakhasayo abafake izicelo kwaye banikwa indawo kwinkqubo ye-MSc yoShishino kunye neNkqubo yoLawulo loTshintsho.
Imali Award: Ibhaso elinye elipheleleyo leMali yeHlabathi. Kwaye ibhaso elinye elipheleleyo leMali yeKhaya / ye-EU, yonyaka omnye.
mfuneko: Abafakizicelo kufuneka babe ngoosomashishini abasakhasayo. Kwakhona, kufuneka ubambe isidanga se-2: 2 okanye ngaphezulu kwishishini okanye isifundo esinxulumene noko. Kwaye isifundi sikwafuna ukuba ubenenqanaba lesiNgesi le-IELTS 7.0. Ngaphandle kwecandelo elingaphantsi kwe-6.0, okanye elilinganayo, ukuba liphuma kwilizwe elingelilo i-Anglophone.
Umhla wokugqibela: 30 Epreli rhoqo ngonyaka.
6. Izifundo zoXolo noPhuhliso lwaMazwe ngaMazwe kwiYunivesithi yaseBradford
IYunivesithi yaseBradford ibonelela ngezifundo ezibini zoXolo kunye noPhuhliso lwaMazwe ngaMazwe (PSID). Kwaye zezabafakizicelo bamanye amazwe. Kwakhona, yenzelwe abo bahlelwa njengabafundi basekhaya (bahlala bevela e-UK nase-EU).
Kwakhona, izifundiswa zezi zezifundo zexesha elipheleleyo ezifundisiweyo zeMasters kwizifundo zoXolo kunye neCandelo loPhuculo lwaMazwe ngaMazwe. Kwaye ziyafumaneka kuphela kubafundi abaza kubakho.
Imali Award: Bonke abafundi bamanye amazwe baya kunikwa i- $ 5000 yokufunda njengokuncitshiswa komrhumo. Ngelixa bonke abafundi basekhaya beza kunikwa isibonelelo semali esiyi- £ 2000 yokunciphisa umrhumo.
mfuneko: Bonke abafundi abanikwe indawo nakweyiphi na yezifundo ezifanelekileyo baya kuqwalaselwa kwizifundo.
Umhla wokugqibela: Ayichazwanga ngqo.
7. IYunivesithi yase-Erasmus Holland Scholarship
Kwakhona, le yeyona nto intle endifuna ukuyifunda phesheya ngezifundo zasimahla. Kwaye le nkxaso mali ixhaswa liSebe lezeMfundo laseDatshi, iNkcubeko kunye neNzululwazi kunye neYunivesithi yase-Erasmus iRotterdam.
Ngaphaya koko, isifundi senzelwe abafundi bamanye amazwe abavela ngaphandle kwe-European Economic Area (EEA). Kwaye yeyabo bafuna ukwenza izidanga zabo ze-Bachelors okanye zeMasters eHolland.
Kwakhona, igubungela i-Bachelors kunye ne-Masters degree nakwesiphi na isifundo nakwesiphi na isifundo. Nangona kunjalo, ngaphandle kwezifundo kwiZiko laMazwe ngaMazwe lezeNtlalo (ISS). Kwaye kwiSikolo se-Erasmus seFilosofi (ESPhil). Nceda qaphela. Kuphela ngabafundi be-Master Master kwiFilosofi nakwi-Economics abafanelekileyo.
Imali Award: € 5,000, € 10,000 okanye € 15,000 (eya kugqitywa yi-faculty).
mfuneko: Abafakizicelo kufuneka babe ngabangengobemi be-EEA ekufuneka behlawule imali yokufunda. Kwakhona, kufuneka ube ngabafundi abagqwesileyo ngokwemigangatho yecandelo elifanelekileyo. Kwaye kufuneka ufake isicelo se-bachelor yexesha elipheleleyo okanye inkosi kwi-Erasmus University Rotterdam. Kwakhona, kufuneka ube nguMfundi ongakhange afumane idiploma kwiziko lemfundo eNetherlands.
Umhla wokugqibela: 1 Feb / 1 Meyi 2021.
Amanqaku afumanekayo: Ayichazwanga ngqo
Oku kungasentla zezona ziphakamileyo ndifuna ukufundisisa phesheya ukuze ndifunde mahala. Nangona kunjalo, ngaphambi kokufaka isicelo qiniseka ukuba oyikhethayo ikulungele. Umnqweno omhle.
I-THEPOLYTECHNIC-ADOKA Post Imibuzo ye-UTME edlulileyo 2021 kunye neempendulo ukhuphelo lwePDF
IYunivesithi yaseIbadan: Iingcali zeProffer Solution kwizifo zangoku zeTamatato
Imirhumo yeSikolo se-UNN seSidanga sokuqala kwi-2019/2020 yoMfundi oMtsha noBuyayo
I-UTS yeNepal Postgraduate Coursework Scholarship 2020/2021 yoHlaziyo
Imisebenzi e-Yobe State 2020/2021 kunye nendlela yokufaka iMisebenzi eMva nje eYobe
Faka isicelo ngoku kwiihotele ze-S & S kunye ne-Suites Job eLagos kwi-Front Office Supervisor
Iindlela zokufumana iigranti zikaRhulumente zasimahla zokuVula iVenkile yokutya eMelika
« I-17 yeeScholarship zoBunjineli eziFundisiweyo ngokupheleleyo 2021/2022 Uhlaziyo lwePortal
IHaryana Scholarship 2021/2022 yesicelo sePortal haryana.gov.in »